Suuriya (Af Ingiriis : Syria; Af-Carabi: سوريا‎ ama سورية) waa dal ku yaala Bariga Dhexe ee qaarada Aasiya. Dalkaan wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Lubnaan, Israaiil, Urdun, Turki iyo Ciraaq. magaalo madaxda wadanka waa Dimishiq. Suuriya waxaa degen dad gaaraaya ilaa 22,505,000 oo qof qiyaastii. Suuriya waxeey ka midtahay wadamada aadka ugud xadaarad fog dunida, waxeeyna leedahay taariikh aad u dheer, Suuriya waxeey jiri jirtay kumanaan sano kahor, waxaana soo gumeestay dawladihii cosmaaniyiinta iyo Faransiiska.
Last edited on 8 May 2022, at 03:49